झुण्डिनु अघि पत्रकार पुडासैनीले कोसँग भेटे ? मृत्यु रहस्यमय भन्दै सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश « जालपा न्युज Jalapa News
झुण्डिनु अघि पत्रकार पुडासैनीले कोसँग भेटे ? मृत्यु रहस्यमय भन्दै सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश
माउन्टेन टेलिभिजनमा कार्यरत पत्रकार शालिकराम पुडासैनीले मृत्यु अघि जग्गा व्यवसायीसँग भेटघाट गरेको बुझिएको छ । पुडासैनाीले मृत्युअघि केही जग्गा व्यवसायीसँग छलफल गरेको चितवनको साैराहा अनलाइनले भिडियोसहित पुडासैनीको समाचार प्रकाशन गरेको छ । उसले पुडासैनीको झुण्डिएको अवस्थाको तस्बीर समेत सार्वजनिक गरेको छ ।
नुवाकोटको बेलकोटगढी नगरपालिका वडा नम्बर ३ घर भएका शालिकराम पुडासैनी चितवनको कंगारू होटलको कोठामा झुण्डिएको अवस्थामा फेला परेका थिए । पत्रकार पुडासैनी सोमबार राति नै झुण्डिएको अवस्थामा फेला परेका हुन । प्रहरीले उनको साथमा रहेको परिचयपत्रका आधारमा उनको आफन्तलाइ राति नै खबर गरेपछि उनीहरू अहिले चितवन पुगेका छन । उनी नाइलनको डोरी पंखामा पासो लगाएर झुण्डिएको अवस्थामा रहेका छन ।
तस्बीरः साैराह अनलाइनबाट साभार ।
एउटा खुट्टा खाटमा र एउटा खुट्टा झुण्डिएको अवस्थामा पुडासैनीको शव भेटिएको छ । पुडासैनी झुण्डिएको डोरी भुइँमा समेत लतारिएको छ । उनी दुइवटा खाटको बीचमा टेबुल राखेर पंखामा पासो लगाउन पुगेको जस्तो पनि देखिन्छ यद्यपी एउटा खुट्टा खाटमा टेकिइरहेको अवस्था हेर्दा कसैले झुण्डाएको हो कि भन्ने शंका गर्ने ठाउँसमेत रहेको छ ।
पुडासैनी त्यहाँ रिपोर्टिङकै लागि पुगेका थिए वा अन्य कामले गएका थिए भन्ने केही खुलेको छैन । यसबारेमा उनीकार्यरत माउन्टेन टेलिभिजनले अहिलेसम्म कुनै अाधिकारिक सूचना जारी गरेको छैन । समाजिक सञ्जालमा भने शालिकरामको हत्या भएको भन्दै चर्को बिरोध भैरहेको छ । धेरैले शालिकरामको मृत्यु शंकास्पद भएको भन्दै छानविनको माग गरेका छन ।दैनिकीबाट
नेपाली कांग्रेसले १४औं महाधिवेशनको मिति फेरि सार्ने तयारी गरेको छ । केन्द्रीय निर्वाचन समिति र
नेकपा (एमाले) सुर्यगढी गाउँपालिकाको अध्यक्षमा राजेन्द्र रिजाल
नेकपा (एमाले) सुर्यगढी गाउँपालिकाको अधिबेशन सम्पन्न भएको छ ।अधिबेशनले राजेन्द्र रिजाललाई अध्यक्षको जिम्मेवारि दिएको छ
नेकपा (एमाले) किस्पाङ गाउँ पालिका वडा नम्बर ४ को अध्यक्षमा होम बहादुर घले
नेकपा (एमाले) किस्पाङ गाउँ पालिका वडा नम्बर ४ को वडा अधिबेशन सम्पन्न भएको छ ।अधिबेशनले
विश्वमा बढ्दो तापक्रमलाई राेक्न कार्बन उत्सर्जन ७ गुणाभन्दा बढी कटौती गर्नुपर्ने